SEO: U Beddelka Erayada Muhiimka ah ee Xiriirka | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/SEO: U Beddelka Erayada Furaha ee Hay'adda Xiriirinta
SEO: U Beddelka Erayada Furaha ee Hay'adda Xiriirinta
Erayada furaha ayaa awood u leh inay beddelaan waxqabadka raadinta dabiiciga ah, laakiin maaha sida aad u malaynayso. Muhiimada xogta ereyada muhiimka ah waxay dhaafsiisan tahay calaamadaha cinwaanka iyo cinwaannada bogga. Ka fikir ereyada muhiimka ah inay yihiin kayd fursado ah si aad u kordhiso awooda isku xidhkaada iyada oo loo marayo abuurista nuxurka iyo dhiirrigelinta.
Aqoonsiga ereyada muhiimka ah ee rajaynaya in la raadiyo inta badan waxay tilmaami doontaa nuxurka, taas oo, haddii la hawlgelinayo, ku dhiirigelin doonto kuwa kale inay ku xidhaan, kordhinta awoodda boggaaga.
Maamulka isku xidhku waa mid ka mid ah saameeyayaasha ugu muhiimsan sida goobtu u kala sarayso. Waa isku-darka dhammaan xiriiryada ay ka hesho kuwa kale. Mid kasta oo ka mid ah boggaga kale wuxuu leeyahay xoogaa awood xiriiriye ah. Marka ay ku xidhmaan goobtaada, waa codka kalsoonida oo tilmaamaya in goobtaadu leedahay qiimo ama awood u qalanta in lagu xidho mawduuc gaar ah.
Matoorada raadinta ayaa markaa isticmaala codka kalsoonida si ay u go'aamiyaan sida awooddaada - ama u qalmida darajada - la barbar dhigo boggaga kale weydiin kasta.
Haddaba sidee ereyada muhiimka ahi u kordhiyaan awoodda isku xidhka? Waxay tilmaamayaan nuxurka aad u baahan tahay inaad abuurto si aad ugu qanciso milkiilayaasha kale ee bogga in goobtaadu ay u qalanto in lagu xidho, taas oo markaa u gudbinaysa u qalmida darajada.
Dhammaan waxay ka bilaabmaan xogta. Xogta ereyga muhiimka ah waxay kaa caawinaysaa inaad fahamto macaamiishaada iyo rajadaada - waxay rabaan iyo waxay u baahan yihiin. Marka ay su'aal galaan baar raadinta, waxay muujinayaan rabitaan ah inay wax bartaan ama wax iibsadaan.
Waxaad u isticmaali kartaa macluumaadkaas wadar ahaan si aad u ogeysiiso istaraatiijiyadda nuxurka guud iyo sidoo kale qaybo gaar ah.
Waxaan ka hadlay makaanikada cilmi baarista iyo falanqaynta kelmadda muhiimka ah, “Sida loo sameeyo SEO, Qeybta 5: Cilmi-baarista Keyword ee Ficil."
Xogta ereyga muhiimka ah oo si adag gacanta ugu jirta, waxaad si fiican u fahmi kartaa noocyada macluumaadka ay rabaan iyo ujeedadooda ka dambeysa rabitaankaas.
Intaa waxaa dheer, waxaad ogaan doontaa rabitaannada kaxeeya baahida ugu badan ee raadinta. Dad badan oo raadinaya mawduuc, ayaa sii badanaysa qiimaha ay kugu noqonayso inaad bartilmaameedsato macluumaadkaaga.
Tusaale ahaan, waxaad dhahdaa waxaad iibisaa dambiisha hadiyadaha. Xogta ereyga muhiimka ah ayaa kuu sheegi doonta haddii dadku rabaan dambiisha miraha iyo dambiilaha khamriga ee tiro ka badan dambiisha shukulaatada. Waxa kale oo ay kuu sheegi kartaa kuwa caanka ah ee qaata hadyada (sida ragga iyo hadyadaha ganacsiga) iyo munaasabadaha haddiyad-bixinta ee caanka ah (sida Christmas-ka iyo maalmaha dhalashada).
Iyada oo ku saleysan macluumaadkaas, oo lagu daray xogta raadinta dabiiciga ah ee hadda jirta iyo aqoontaada badeecadaha ugu faa'iidada badan, waxaad soo ururin kartaa istiraatiijiyad nuxur iyo khariidad waddo.
Wax badan oo ku saabsan adeegsiga xogta ereyga muhiimka ah si aad ugu wargeliso istiraatijiyadda macluumaadkaaga, eeg "SEO: Istaraatiijiyada Wadista Macluumaadka ee Cilmi-baarista Keywordka."
Marka xigta, iyada oo istaraatiijiyadu jirto, samee jadwal tafatir ah oo qaybo ka kooban shakhsi ahaan.
"Nuxurka" macnaha guud macnaheedu waa wax kasta oo aad ku dhejiso bogga internetka ee buuxinaya rabitaanka macaamiisha iyo ulajeedka. Taasi waxay noqon kartaa kedis, hage iibsi, hab-tusaale, muuqaal, sawir, ama maqaal qaab-dheer.
Ma tixraacayso bogag ku cidhiidhya ereyada muhiimka ah oo keliya si ay u soo jiitaan matoorada raadinta. Haddii macluumaadkaagu aanu ka qaybgelin macaamiisha, lama wadaagi doono oo xidhiidhin maayaan. Taasi waxay jabisay himilada hagaajinta mashiinka raadinta ee abuurista nuxurka meesha ugu horeysa.
Laakiin kuma filna in la sameeyo cilmi-baadhista oo fikradaha loo dhiibo naqshadeeyayaasha iyo horumariyayaashu si ay u hirgeliyaan. Wadashaqeyn hal abuur leh ayaa fure u ah in la hubiyo in nuxurku uu kicin doono qiimaha raadinta dabiiciga ah marka uu nool yahay.
Waxaa jira tilmaamo loogu talagalay nuxurka, iyadoon loo eegin qaabka, kaas oo u horseedaya qiimaha ugu badan ee SEO.
Ku dar nuxurka qoraalka Haddi waxa ku jira uu yahay qaab matoorada raadinta ay dhib kala kulmaan tusmaynta, sida su'aalaha, muqaalka, ama sawirka, ku dar ciwaan qoraal ah iyo soo koobid bogga sidoo kale. Tani waxay u gudbinaysaa macnaha macnaha guud ee makiinadaha raadinta, si loogu waafajiyo macluumaadkaaga raadinta la xidhiidha.
Hal bog, hal qayb oo nuxur ah. Waxyaabaha qaarkood - sida fiidiyowyada iyo FAQ-yada - waxay u badan tahay in lagu ururiyo hal bog. Taasi waxay adkeynaysaa in la gudbiyo muhiimadda gaarka ah ee qayb kasta. Haddii fiidiyoow kasta, tusaale ahaan, ka kooban yahay macluumaad gaar ah, shay ay macaamiishu raadin lahaayeen, dhig bog gaar ah mawduuca ereyga muhiimka ah ee gaarka ah.
Ku marti geli goobtaada ecommerce. Ujeedadu waa in lagu dhiirigaliyo dadka inay dib ugu xidhaan goobtaada. Haddii aad u isticmaashid bog kale maadada aad abuurayso, xidhiidhiyadu way ku soo biirayaan, ma aha bogga aad rabto inaad ku kordhiso awooda xidhiidhka.
Ha isticmaalin waxyaabaha la isku daray. Waxyaabaha gaarka ah ayaa fure u ah guusha. Ha ku darin macluumaadka boggaga kale Mawduuca la isku daray ayaa sida caadiga ah ka kooban qoraallo tixraacaya maamulka isku xirka goobaha asalka ah, ee ma aha kaaga.
Mawduucaagu ma heli doono hoos u dhac awood xidhiidhiye ah haddii aanu qofna arag ama ku xidhin.
Ku xayeysiiso waxa ku jira xiriirka dadweynaha, fariimaha bulshada, iimaylka, iyo kanaalada kale.
Tusaale ahaan, maamulayaasha warbaahinta bulshada waxay wadaagi karaan muuqaal ama muuqaal. Laakin ka-qaybgalka dadka Facebook-ga ma keenayso in lagugu soo celiyo degelkaaga. Wadaagista shay Facebook-ga soo saara gujin boggaaga waxay keeni kartaa saamiyo iyo isku xidhka macluumaadkaas. Iyadoo saamiyada Facebook aysan si toos ah u saameynin qiimeynta raadinta, waxay ballaariyaan qaybinta macluumaadkaas kuwa kale ee xiriirin kara.
Xidhiidhka dadweynuhu waxa kale oo uu saamayn karaa isku xidhka goobta. Qayb ka mid ah helitaanka xiriiriyeyaasha ayaa weydiinaya iyaga. Mareegaha warbaahinta qaarkood si toos ah ulama xidhidhiyaan hay'adaha ay ka warbixiyaan. Laakiin kuwa kale ayaa sameeya. Tababar kooxdaada PR sida loo weydiiyo xidhiidhkaas, iyo waxa lagu xidhidhiyo. Oo hubi in macluumaadkaagu uu mudan yahay in lagu xidho - ma aha oo kaliya war-saxaafadeed.
Wixii dheeraad ah, eeg "SEO: 6 Siyaabaha loo kordhiyo Dib-u-xirmooyinka."
Khaladaadka SEO ee ugu caansan goobta WordPress
Hagaha Khariidadaha Google ee WordPress: Ku dheji Plugin ama La'aanteed